Maxay shacabka Jigjiga ka yiraahdeen magacaabista ra'iisul wasaare XAMZA? - Caasimada Online
Home Warar Maxay shacabka Jigjiga ka yiraahdeen magacaabista ra’iisul wasaare XAMZA?
Jigjiga (Caasimada Online) – Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga oo uu warramay VOA-da ayaa ka hadlay magacaabista ra’iisul wasaaraha cusub ee uu shalay ku dhawaaqay Madaxweyne Xasan Sheekh, oo uu u magacaabay Xamza Cabdi Barre.
“Aadbaan ugu faraxsanahay 100% ra’iisul wasaare Xamza, sababtoo ah waa nin Soomaaliyeed, waa aqoonyahan Soomaaliyeed, waa nin karti leh,” ayuu yiri C/raxmaan.
“Waa taariikh ugub ku ah dadka Soomaaliyeed in maanta Madaxweynaha uu usoo xusho ninay isku xisbi yihiin muddo dheer ay soo wada ahaayeen saaxibo isku dhow” ayuu yiri.